Ike gas na-emepụta mmetọ | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ike gas na-emepụta mmetọ
Manuel Ramirez | | Ike ike
La ike gas eji anya oma hu ya kemgbe o di mmanụ dị ọcha karị karịa unyi na mgbe ụfọdụ a na-eji dị ka ya eke dochie anya.
Ma aha ọma a abụghị eziokwu dị ka ọ dị ka akụkọ na akụkọ dị iche iche si dị, bụ nke a kọwara ya etu ume nke sitere na gas na-esi eweta mmetọ dị ukwuu mgbe a na-arụ ọrụ nke iwepụta ya. Ọ bụ kpomkwem mgbe ọ na-enwu ọkụ na usoro oku na-ahụ nke ọma karị n'ihi na anwuru gas ya dị ala n'oge ahụ.
Have ga-akpachara anya na otú e si jiri ụfọdụ ngwaahịa kpọrọ ihe, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na ngalaba ikpeazụ nke mmetọ a rụpụtara apụtaghị, mana na usoro ahụ dum. Ckinggbacha ma ọ bụ ịkụda hydraulic bụ kpọmkwem ebe oge kachasị emetọ ya.
Fracking mejupụtara na ịmepụta mgbawa na nkume nke mere na akụkụ gas na-aga n'èzí ma nwee ike ịmịpụta nke ọma mgbe e mesịrị site na olulu mmiri. Tụkwasị na nke ahụ, nsogbu nke usoro a bụ na a na-eji kemịkal n'akụkụ a nke mmepụta nke ewepụtara na mbara igwe.
Otu n’ime nsogbu ndị dị njọ bụ na ọ na-emetọ mmiri dị n’ime ala na na-ebute nnukwu anwuru nke CO2 na methane, nke na-eme ka okpomoku zuru ụwa ọnụ na mgbanwe ihu igwe ka njọ. N'ihi mmetọ nke mmiri ọ drinkingụ drinkingụ dị n'okpuru ala, ọ na - eme na ahụike nke ndị bi na nso nkwụnye ego na - akawanye njọ ma e wezụga mkpofu ndị ahụ na - abanye n'ikuku.
1 A mmanu mmanu
2 Mmetọ ikuku site na ịmị ike sitere na gas gas
4 Mmetọ nke aquifers
5 Ala ọma jijiji
6 Mmetụta ya
7 Akwụkwọ akụkọ banyere ume nke gas nkịtị
8 Na-achọ ihe ọzọ maka ike gas
A mmanu mmanu
Gas bu ihe eji eme mmanu, obu ezie na anwuru anwu site na oku ya ha abụghị ndị ka n'ọnụ ọgụgụ nke nsogbu na ọ bụrụ na ọ na-akpata kol ma ọ bụ mmanụ ala.
Mmiri gas na-apụta 50 ka 60 dị obere CO2 mgbe combusted na a ọhụrụ eke gas ike osisi jiri ya tụnyere-ahụkarị umu anwuru si a coal osisi. Ọ na-ebelata gas ndị e wepụtara na mbara igwe site na pasent 15 ruo 20 ma e jiri ya tụnyere nke mmanụ ụgbọala na-akpata n'ụgbọala.
Ebee ka ọ dị a na-ahụ ihe ọpụpụ ya na mmịpụta gas na mkpọpu ala gas nke sitere na olulu mmiri na njem ya site na pipeline nke na-eme ka nzacha methane, gas karia karia CO2. Ihe omumu ndi omumu na egosi na umu anwuru na etinye 1% rue umu anwuru.
Mmetọ ikuku site na ịmị ike sitere na gas gas
Gas nkịtị na-egosi Cleaner oku karia mmanu ndi ozo, dika o na emeputa sọlfọ, mercury na ihe ndi ozo. Gas na-ere ọkụ na-emepụta nitrogen oxide, ọ bụ ezie na ọ dị ala karịa mmanụ ụgbọala na mmanụ dizel eji na injin ụgbọ.
Americanlọ 10.000 ndị America na-arụ ọrụ Site na gas nkịtị kama icheku ọkụ, ọ na-ezere anwuru nke 1.900 tọn nitrogen oxide, 3.900 tọn SO2 na tọn 5.200. Mbelata nsị ndị ahụ na-abụ uru ahụike ahụike ọha na eze, ebe ọ bụ na emetọ ndị na-emetọ ihe ndị a enwere nsogbu ndị dị ka ụkwara ume ọkụ, bronchitis, cancer cancer, na ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na enwere uru ndị a, mmepe nke gas na-adịghị mma nwere ike emetụta àgwà ikuku na mpaghara. E nweela nnukwu ikuku ikuku na mpaghara ụfọdụ ebe mkpọpu ala na-apụta.
Ngosipụta dị elu nke mmetọ ndị a nwere ike na-akwalite nsogbu iku ume, nsogbu obi na cancer.
Mgbapu hydraulic bụ usoro iji mee ka mmịpụta mmanụ na gas n'okpuruala. Kemgbe 1947, ihe dị ka nde 2,5 gbawara agbawa gburugburu ụwa, gụnyere otu nde na United States.
Usoro a mejupụtara mepee otu uzo ozo ma obu karie site na ntụtụ nke mmiri dị elu, nke mere na ọ na-emeri nguzogide nke nkume ahụ ma mepee mgbaji a na-achịkwa na ala nke ọma, na ngalaba achọrọ nke hydrocarbon nwere nhazi.
Ojiji nke usoro a kwere mmepụta mmanụ ga-abawanye site na 45% kamgbe afọ 2010, nke mere ka mba Amerịka bụrụ mba nke abụọ kacha emepụta ihe niile n’ụwa.
Ọ bụ kwuru na mmetụta gburugburu ebe obibi nke usoro a, nke gụnyere mmetọ aquifers, oriri mmiri dị elu, mmetọ ikuku, mmetọ mkpọtụ, Mbugharị nke gas na kemịkal eji n'elu, mmetọ elu ala n'ihi ịkwafu, na mmetụta ahụike nwere ike ịpụta na ya.
Ọzọ nke kasị njọ ikpe nke fracking bụ mmụba nke ọrụ ala, nke metụtara ya na mmiri ọgwụ miri emi.
Mmetọ nke aquifers
Na mgbapu hydraulic nke ọma emeela ka ikuku agbapụ, akụrụngwa redioakị na methane na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ.
Enwere ederede ederede aquifers n'akụkụ olulu mmiri gas nke emetọla na mmiri na-emebi emebi yana gas, gụnyere methane na ogige ndị na-agbanwe agbanwe. Otu n’ime ihe ndị kacha akpata mmetọ a bụ a rụọ nke ọma ma ọ bụ olulu mmiri na-agbawa mmiri na-ekwe ka gas banye n'ime aquifer.
Mmiri mmiri a na-ejikwa arụ ọrụ hydraulic eruwo olulu mmiri a gbahapụrụ agbahapụ, tinyere ụfọdụ akara akara na-ezighi ezi, nke na-eme ka aquifers ndị a metọọ.
Ala ọma jijiji
E jikọtara Fracking na arụ ọrụ ala dị ala, ma a dịghị ahụkarị ihe ndị dị otú ahụ n’elu ala.
Ọ bụ ezie na iji mmiri mmiri na-ekpo mmiri mgbe a na-agbanye ya na nrụgide dị elu na klas nke ọgwụ II e jikọtara ya na ala ọma jijiji ndị ka ukwuu na United States. Ọ dịkarịa ala, ọkara ala ọma jijiji 4.5 ma ọ bụ karịa karịa metụrụ n'ime United States n'ime afọ iri gara aga emeela na mpaghara ebe enwere nsogbu.
Nnyocha ọhụrụ e bipụtara na 2016 nke otu ndị ọkà mmụta banyere ala na ndị seismologists duziri site na Texas Methodist University of South na United States Geological Survey, gosiri na ntụtụ nke nnukwu mmiri mmiri na-agakọ na mmịpụta nke brine si na subsoil na akọwa Ezigbo gas bụ ihe kpatara ala ọma jijiji 27 nke dị n'agbata Disemba 2013 na mmiri 2014 nke ndị bi na Azle, na Texas, nwere ebe ha na-enweghị njikọ ọ bụla na ala ọma jijiji ahụ.
E wezụga mmụba nke ala ọma jijiji, mmiri ọgwụ ndị e ji mee ihe na usoro a nwere ike ebibi ma ala ma aquifers n'okpuruala, dị ka British Royal Society si dị na 2012.
Nwekwara ike ịchọta akwụkwọ sayensị atọ edepụtara na 2013 dabara na nke ahụ mmetọ mmiri mmiri site na ụjọ ọ bụghị na o kwere omume. Ihe doro anya bụ na ka ọ ghara ime, usoro arụmọrụ kachasị mma ga-emerịrị mgbe niile. Ọ na - eme na ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị, yabụ enwere nnukwu nsogbu nke imetọ aquifers n'okpuruala.
Akwụkwọ akụkọ banyere ume nke gas nkịtị
Enwere ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ebe enwere ike ịchọta mmegide doro anya na-agbasa dị ka Josh Fox's Gasland. N'ime ya ekpughere nsogbu nke mmerụ nke ọdọ mmiri n'akụkụ olulu mmiri na-ewepụta ebe dị ka Pennsylvania, Wyoming na Colorado.
Ihe ọchị na ọ bụ ụlọ ọrụ mmanụ na gas na-anabata ya jụrụ ndị anakọtara na fim ahụ Fox nke mere na weebụsaịtị Gasland ga-agbagha ebubo ndị otu ndị na-eme mkpọtụ kwuru.
Ihe nkiri ọzọ na-atọ ụtọ bụ Ala Nkwa., nke Matt Damon gosipụtara na isiokwu nke ịkụda hydraulic. Nakwa na 2013, e gosipụtara Gasland 2, akụkụ nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ nke ọ gosipụtara na eserese ya banyere ụlọ ọrụ gas, nke na-egosi ya dị ka ihe ọzọ dị ọcha na nchekwa nke mmanụ, bụ akụkọ ifo n'ezie. Mgbapu mmiri ogologo oge na mmetọ ikuku na mmiri na-emerụ obodo ndị dị nso ma mee ka ihu igwe dị n'ihe egwu n'ihi nsị nke methane, gas na-eme ka ikuku dị ike.
Na-achọ ihe ọzọ maka ike gas
Na ndị a niile kwuru, na gas enweghị ihe dị ọcha Dịka a nwalere ya igosi, mana na usoro ya ọ na ewepụta ihe na-emetọ ihe ikuku na mbara ikuku, dịka ọ na-adị ma e jiri usoro ọgbụgba were ya.
Ọ bụ ya mere o ji adaba adaba ịmara eziokwu nke gbara ume gas na na-agbasi mbọ ike maka isi mmalite ike ndị ọzọ nke ahụ dị ọcha ma na-adigide oge niile dịka ifufe ma ọ bụ anyanwụ, nke bụ ebe anyị ga-aga iji chebe mbara ala a ma daa ụda.
Ndị niile na fuels dabere na fossils-apụghị izere ezere iduga anyị na Paris Climate Summit nke ọtụtụ mba ga-etinye aka na mkpebi ụfọdụ iji debe n'afọ ọzọ na nke ume ọhụrụ ga-abụ isi ebumnuche.
Youchọrọ ịma ihe ndị na-esi mmiri ọkụ gas bụ na otu ha si arụ ọrụ? Echefula isiokwu a:
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara igwe ọkụ gas
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike ike » Ike gas na-emepụta mmetọ
Adriana Enwere m mmasị na edemede gị ma achọrọ m iji ya maka edemede m, ị nwere ike ịgafe m data gị iji zoo gị aka n'ụzọ ziri ezi na ụbọchị ị bipụtara isiokwu a. Daalụ
Zaghachi Diana Alvarez
Ndị ahịa ọhụụ nke Fracking na Chiapas, bọs na-agba na gas, na ole na ole maara mmebi obibi ọ na-eweta na mba ahụ, agbanyeghị na ọ na-ebu "ECO" n'aha ya. Mgbapu hydraulic na-ebibi ọdịdị nke mba anyị
Nnukwu nsogbu dị iche iche maka ndị otu gburugburu ebe obibi na mba a bụ enweghị enweghị ọrụ aka ọrụ na enweghị ọgụgụ isi na arụmụka ha. Ọ dị mkpa tupu ị na-eche ihu na usoro ma ọ bụ nrigbu nke akụ, ịmara ya nke ọma, ma ọ bụrụ na ọ bụghị dị ka m kwuru na mbụ, arụmụka enweghị ikike ọgụgụ isi na ya mere nke ọ bụla.
Arụmụka ahụ dị oke mkpa, ọha mmadụ ga-amata na mmepe ugbu a enweghị ike imebi mmepe nke ọgbọ ndị ga-abịa, mana amaghị na ụjọ enweghị ike ịkwụsị mmepe nke ugbu a.
Gas nkịtị mgbe a na-ere ọkụ na-emepụta 1/5 nke ikuku CO2 nke ndị na-emepụta site na icheku ọkụ, n'ezie ọ bụghị 100% dị ọcha mana ọ bụ nhọrọ ka mma.
Ọ bụ ụgha na ịkụda hydraulic dị mkpa maka mmịpụta nke gas, ọ nwere ike ime n'ụzọ nkịtị ma ọ bụrụ na ebe mmiri na-enye ya ohere, ma emeela nke a ruo ugbu a.
N'ikpeazụ, anwụrụ methane na-anaghị achịkwa n'oge mmepụta gas na-anwa iwelata ka o kwere mee, nke a bụ ihe nghọta dị mfe, mgbe ụlọ ọrụ mmịpụta na-etinye nnukwu ego na mmepụta nke ọma, ihe ikpeazụ ọ chọrọ bụ maka ihe ahụ na nyocha gị ga-agbanahụ gị. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ mgbe ụfọdụ a na-apụghị izere ezere, mana iji belata nke a na osisi mmepụta, ọwa ọkụ na-agba ọkụ methane na-agbanahụ (nke na-emerụ ahụ ma nwee mmetụta griinụ 8 ugboro karịa CO2) na CO2, na-enwe mmetụta griinụ dị ala karị.
Okpomoku zuru uwa bu nsogbu di oke nkpa ka elebara anya, na ikuku nke ikuku griiz na mbara igwe aghaghi ibelata dika o kwere mee. Onwe m, ekwere m na mgbanwe gaa na ọha mmadụ nwere ọkwa ikuku carbon dị ala na ala ruo mgbe ọ ruru 0. Ma na n'oge dị mkpirikpi dị mgbagwoju anya na ọ dị mkpa ịdị na-agbasi ike na arụmụka ahụ ma na-eburu n'uche ụdị ndị na-adọrọ mmasị.
Manuel Ramirez ka m gwa gị na isiokwu gị dị ezigbo mma, echere m na gas "eke" enweghị mmetọ n'ezie mana ahụrụ m ugbu a dị iche iche, ọ na-egbu mgbu etu esi achụ aja mmiri, maka nke a.
Ikwuru eziokwu banyere ike ikuku, mana nke a nwekwara nsogbu ya n'ihi na mgbe ha choro ogologo oge oyi, ike a ga-agwụ, ugbu a ọ ga-amasị m ịjụ gị nhọrọ ndị ọzọ na-enweghị mmetọ anyị nwere ike iji?
Zaghachi carlos fabian
Daalụ maka okwu gị Carlos!
maria morigo dijo
ilekọta gburugburu ebe obibi bụ ilekọta onwe anyị
Zaghachi maia morinigo
Chọ QualityConsulting dijo
Ezigbo isiokwu na ezigbo isi ... ihe niile bụ fosilil ga-acha akwụkwọ ndụ
Zaghachi na Qualityor Consoria
Ọ bụ eziokwu na ọ bụ gas nkịtị mana ọ nweghị mmerụ ahụ (nke ahụ bụ ihe ndị mmadụ na-eche). Mana obu mmanu mmanu fosil nke putara na oghalaa ma meru
Akwụkwọ nke isiokwu ahụ dị ezigbo mma. Ana m akwụ ụgwọ maka ndị nwere mmasị ole na ole "nke agbụrụ nke agbụrụ ahụ", gbasara mmetụta griin haus na okpomoku zuru ụwa ọnụ nke metụtara anyị niile ma mesịa gbuo anyị ka anyị ghara ịkwụsị ya site n'ịchọsi akụ na ụba na ọ nweghị onye ga-aga n'ili na ee ọ ga-ahapụ na nloghachi, nkwado ya na-egbu ụwa. Nke a emeela ka m kwalite n'oge na-adịghị anya otu ọrụ ọkụ eletrik dị mkpa na Dominican Republic, site na mmiri nke mmiri nke Oke Osimiri Caribbean site na ike ndọda na ọkwa mbụ site na tunnels na obere ọdịda corrosion turbines, na nke abụọ ogbo ya na oke mmiri ahu site na ngabiga site na ime igwe igwe osmosis buru ibu, nke edebere na nnuku miri ga eweputa uzo nke abuo. Mmiri a rụpụtara ugbua na mita 44 n'okpuru oke osimiri (na ndagwurugwu La Bahía de Neiba) ga-arụ ọrụ ma jiri maka oriri na ụlọ ọrụ agro yana klorides na ngwaahịa ndị ọzọ nke electrolysis ga-ewepụta dị ka ọla edo dị ala, wdg. ...
Zaghachi Danilo Martinez Olivo.
Alexander ocampo dijo
Ọ ga-amasị m ịmata nke n'ime gas abụọ ahụ, propane na eke, na-emepụta carbon monoxide karịa ọkụ mgbe ọkụ?
M na-ajụ n'ihi na m na-ejikarị gas na-eme mmiri na-agbanye mmiri na gas na nso nso a.
Ebe ọ bụ na m gbanwere gas, ahụrụ m otu isi na-esi ísì ụtọ nke na-eme m ka anyaụfụ, nke na-emeghị m mgbe m na-eji propane. Aghọtakwara m na monoxide nke c. ọ bụ ihe na-esi isi ... mmadụ nwere ike inyere m aka?
Zaghachi Alejandro ocampo
Ezi ụtụtụ, ị nwere ike ịnye m ozi gị ka m wee nwee ike ịkpọtụrụ gị na ngalaba nyocha m. Daalụ
kwụsị ị smokingụ sịga na laser malaga dijo
Blog na-akpali mmasị. M na-amụta ihe site na weebụsaịtị ọ bụla kwa ụbọchị. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ mgbe niile inwe ike ịgụ ọdịnaya ndị edemede ndị ọzọ. Ọ ga-amasị m iji ihe site na post gị na weebụsaịtị m, n'ụzọ nkịtị m ga-ahapụ njikọ, ma ọ bụrụ na ị kwe ka m. Daalụ maka ịkekọrịta.
Na-azaghachi ị smokingụ sịga na laser malaga
Ọnye na -bụ Luis Antonio Riaño? dijo
N'abalị na m na-eme nchoputa banyere mmetọ nke gas na-amasị m na isiokwu gị ị nwere ike ịnye m data maka ntụle nyocha m.
Zaghachi Luis Antonio Riaño
ok dick ọ baghịrị m uru: v
Zaghachi ka zaid
ỤLỌ MARITZA dijo
Manuel Ramírez, enwere m mmasị n'isiokwu gị banyere "ike gas na-arụkwa mmetọ" enwere m mmasị na ya ma achọrọ m iji ya maka edemede m, ị nwere ike ịgafe m data gị iji zoo gị aka n'ụzọ ziri ezi na ụbọchị ị bipụtara isiokwu a. Daalụ
Zaghachi MARITZA MORALES
TS agaghi akwusi okpokoro nke mmeghari ohuru
Kedu ihe bụ aerothermy?